यस्ता नियम पालन गर्नुस्, कोरोनाबाट बच्नुस् ! – कदर न्यूज अनलाईन डिजिटल पत्रिका : Oneline Digital Kadarnews:
८ भदौ, धरान । कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगिन के गर्नुपर्ला ? घरबाट बाहिर ननिस्कनु नै अन्तिम विकल्प हो त ? कोरोना सङ्क्रमणबाट निको भएका तथा चिकित्सकहरू सामान्य स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरे पुग्ने बताउँछन् ।